Ndị Kachasị Aka Nhọrọ Ike Free | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | software, Nkuzi
N'ime afọ 20 gara aga, anyị ahụla etu ụzọ abụọ si bụrụ ọkọlọtọ n'ime ịntanetị. N'otu aka anyị na-ahụ faịlụ dị na PDF, usoro nke dị ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ niile na-enweghị iji ngwa mpụga ọ bụla mepee ya. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ ihe ngosi na ụdị .pps na .pptx. Mgbatị ndị a dabara na faịlụ maka mepụta ihe ngosi sitere na ngwa Microsoft PowerPoint.
Iji nweta ngosipụta kere na a ngwa, ọ dị mkpa ka nwere dakọtara na-ekiri, ihe niile nke na-dakọtara ma ọ bụghị dị natively. Microsoft PowerPoint bụ ngwa kachasị mma dị ugbu a n'ahịa maka ịme ụdị ngosi ọ bụla, mana ọ bụ ngwa chọrọ ndenye Office 365 iji nwee ike iji ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ndị ọzọ iji mepụta ngosi, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị ihe bụ nhọrọ kachasị mma na PowerPoint.
N'ime ndị ọzọ dị ugbu a n'ahịa, anyị nwere ike ịchọta nhọrọ efu na nke akwụrụ ụgwọ, yabụ ọ nwere ike ọ gaghị abụ ajọ echiche ịkwụ ụgwọ maka ndenye aha Office 365 ọ bụrụ na anyị bu n’obi inweta ọtụtụ ihe na ya na PowerPoint, ma ọ bụ site na ọrụ anyị na-adịbu ma ọ bụ jiri oge anyị nwere ike iji nwee ike ịgbanwe nsonaazụ ya na vidiyo ka ị nwee ike bipụta ya ma emesịa n’elu ikpo okwu vidio kachasị eme n’ụwa: YouTube. Nhọrọ na ohere nke PowerPoint na-enye anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị njedebe, n'ihi ihe kpatara na ọ nọ n'ahịa ruo ọtụtụ afọ ịbụ ebe kachasị mma maka ịmepụta ihe ngosi, dịka Microsoft Word ma ọ bụ Excel na mpaghara ha.
1 Isi ihe, PowerPoint nke Apple
2 Google Slides, ihe ozo nke Google
3 Prezi, otu n’ime ihe kacha mma dị na ntanetị
4 Ludus, mepụta ihe ngosi di egwu n'ụzọ dị mfe
5 Canva, kedu ihe dị mkpa
6 Swipe, gbanwee okwu gaa na mkparịta ụka
7 Slidebean, maka ihe
8 Zoho, nke sitere na PowerPoint
9 Nhọrọ kacha mma na PowerPoint?
Isi ihe, PowerPoint nke Apple
Anyị na-amalite nhazi ọkwa a na free ọzọ ka Apple na-eme ka ndị ọrụ niile nweta ma desktọọpụ desktọọpụ, macOS, na ikpo okwu maka ngwaọrụ mkpanaka, iOS. Ruo afọ ole na ole ugbu a, Apple enyela ndị isi ọrụ nwere ihe Keynote ngwa niile nwere Apple ID n'efu, na mgbakwunye na ngwa ndị ọzọ bụ akụkụ nke iWork, ọbụlagodi na ha enweghị ọdụ ọ bụla nke Apple rụpụtara, ebe ọ bụ na iCloud.com nwere ike ịrụ ọrụ niile ọ na-enye anyị, gụnyere Isi, Peeji na Nọmba.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ na-efu Iji nwee ike ịhazi ọbụlagodi obere nkọwa, ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma kachasị akwụ ụgwọ na ahịa dị na ahịa. Na mgbakwunye, Apple na-emelite ngwa a mgbe niile na-agbakwunye ọrụ na ngwaọrụ ọhụụ nke na-enye anyị ohere ịmekwu ihe ngosi anyị yana ịgbakwunye ndakọrịta kachasị na faịlụ na usoro.
Google Slides, ihe ozo nke Google
A na - ahụ ndị ọzọ na - enweghị nnwere onwe ọzọ na ụlọ ọrụ ntanetị nke Google na - enye anyị ihe ngosi. Ihe ngosi mmịfe bụ a igwe ojii Site na nke anyị nwere ike ịmepụta ihe ngosi anyị, ụfọdụ nkwupụta dị mkpa na-enweghị ọtụtụ frills, ebe ọ na-arịa ụkọ nke ọtụtụ nhọrọ. Ọ bụrụ na anyị ga-eme ngosi ọnụ, ọrụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, ebe ọ na-enyekwa anyị nkata ka onye ọ bụla so na ọrụ ahụ nwee ike ịmekọrịta na ikwu okwu n'oge.
Bebụ agbakwunye n'ime usoro okike Google, anyị nwere nnweta nnweta ozugbo na foto ndị anyị debeere na Foto Google iji nwee ike itinye ha ozugbo na ngosipụta ahụ na-enweghị ike bulite ha n'oge ọ bụla na igwe ojii Google iji tinye ha. A na-echekwa ihe ngosi niile na akaụntụ Google Drive anyị, nke na-enye anyị, yana Gmail na Google Photos, ruo 15 GB nke nchekwa kpamkpam n'efu. Ihe ngosi Google di n'ime Google Drive ma mepụta ihe ngosi na Google Slides, anyi kwesiri ịpị New ka ịhọrọ ụdị faịlụ anyị chọrọ ịmepụta.
Prezi, otu n’ime ihe kacha mma dị na ntanetị
Dika ihe ngosi PowerPoint malitere ijide, Kwado malitere ibu, na onwe ya ruru, otu n'ime ndị ọzọ kachasị mma dị n'ahịa, ka dịkwa taa. Ekele maka Prezi anyị nwere ike ịmepụta ngosi dị ike site na isiokwu dị iche iche nke ikpo okwu na-enye anyị, isiokwu nke anyị nwere ike itinye ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị ọzọ anyị chọrọ.
N'ihi mgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe, kama ile anya dị ka anyị na-ahụ slide, ọ ga-enye anyị mmetụta na anyị na-ele obere vidiyo ebe ọbụlagodi isiokwu na-agwụ ike nwere ike ịmasị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji oge ụfọdụ na-eji ọrụ a, Prezi bụ n'efu ma ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu na ngosi dị maka onye ọ bụla. Ọ bụrụ, na aka nke ọzọ, ịchọghị ịkekọrịta ihe okike gị, ị ga-aga ndenye ọpụpụ ma nweta otu n'ime atụmatụ kwa ọnwa dị iche iche nke ikpo okwu a na-enye anyị.
Ludus, mepụta ihe ngosi di egwu n'ụzọ dị mfe
Ludus, dị ka Prezi, ọ bụ ọrụ ntanetị ọzọ na afọ ndị na-adịbeghị anya ejirila akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ chọrọ ịmepụta ụdị ngosi ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị chọrọ mepụta ihe ngosi dị ka vidiyo karịa ihe ngosi Ludus bụ nhọrọ kacha mma. Na vidiyo dị n'elu ị nwere ike ịhụ nhọrọ niile ọ na-enye anyị na ihe niile anyị nwere ike iji ọrụ a dị egwu.
Otu uru kachasị na ọ na-enye anyị ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị ọzọ dịka Prezi, bụ mwekota na YouTube, Giphy, SoundCloud, Google Maps, Facebook, Instagram ... nke na-enye anyị ohere ịgbakwunye ọdịnaya ọ bụla site na nyiwe ndị a ọsọ ọsọ na mfe. N'ihi nnabata na ndakọrịta na faịlụ na usoro GIF, anyị nwere ike ịmepụta obere ihe nkiri karịa ngosi.
Freedị Ludus na-enye n'efu na-enye anyị ohere mepụta ihe ngosi 20, nchekwa ruru 2GB na ohere nke ibupụ ihe ngosi mmịfe na usoro PDF. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ọzọ, anyị ga-aga ndenye ọpụpụ ma họrọ maka atụmatụ Pro, atụmatụ nke na-enye anyị ohere ịmepụta ọnụọgụ na-enweghị njedebe, ngosipụta nke anyị nwere ike ịchekwa na ohere 10 GB nke ọ na-enye anyị. , ohere nke nbudata ihe ngosi maka ugbu a na-enweghị njikọ Internetntanetị na mgbakwunye na ikwe ka anyị chebe ihe ngosi na paswọọdụ.
Canva, kedu ihe dị mkpa
Ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ a Mfe, enweghị ike ọzọ na PowerPoint, na ma Prezi ma Ludus buru oke ibu nye anyị, Canva O nwere ike ịbụ ihe ọzọ ị na-achọ. Canva na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke onyogho, ka ị gbakwunye na ihe ngosi ahụ kpamkpam n'efu, na-ezere na anyị ga-anọgide na-achọ Google maka onyonyo iji mepụta ngosi anyị. Ọrụ ahụ dị mfe, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-ahọrọ ihe ndị anyị chọrọ itinye wee dọrọ ha gaa ebe anyị chọrọ ka ha nwee na ngosi.
Ọ na-enyekwa anyị ohere rụọ ọrụ n'ìgwè, na-enye anyị ohere ịnweta ihe karịrị ndebiri 8.000 na 1 GB nke nchekwa na mbipute n'efu. Ọ bụrụ na anyị họrọ maka mbipute Pro, nke ọnụahịa ya bụ $ 12,95 kwa ọnwa, anyị ga-enwekwa ike ịnweta ihe karịrị 400.000 onyonyo na ndebiri, anyị nwere ike iji akara ederede, hazie foto na ngosi na folda, atụmatụ mbupụ dị ka GIF na mgbakwunye enwe ike iji ya mee ihe maka ngosi ndị ọzọ ...
Swipe, gbanwee okwu gaa na mkparịta ụka
Mgbe ụfọdụ a na-amanye anyị ịmepụta ngosipụta nke ahụ ekwesighi igosipụta ozi ọhụụKama, ọ bụ maka ịnye ozi site na ịnye nhọrọ dị iche iche, ma dabere na nke anyị họọrọ, otu ozi ma ọ bụ ọzọ ga-apụta. N'okwu a, Swipe Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ahịa. Ọzọkwa, dịka e mere ya maka nzube a, anyị nwere ike itinye ederede nke ogologo dị iche iche site na ndakọrịta Markdown.
Versiondị n'efu na-enye anyị ohere rụkọta ọnụ ọgụgụ ngosi na-enweghị njedebe, mepụta ihe ngosi nkeonwe ma bupụ nsonaazụ na usoro PDF. Ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye ọnụ ọgụgụ, nchebe paswọọdụ, njikọta njikọ, nkwado na ọtụtụ ndị ọzọ, anyị ga-enwerịrị ọpụpụ site na 15 euro kwa ọnwa.
Slidebean, maka ihe
Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị amanye mepụta ụdị ngosi ụfọdụ, iji gosipụta ngwaahịa, kọọ akụkọ nsonaazụ nke atọ, gbasara ọrụ, ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla chọrọ usoro nke ndebiri ndebiri, Ihe mmịfe Ọ bụ nhọrọ kachasị mma na ahịa. Site na Slidebean naanị anyị ga - ahọrọ ụdị ndebiri anyị na - achọ ma jiri nke anyị dochie data ya. Dị mfe dị ka nke ahụ.
Emeghị slidesbean ka ọ gbanwee interface, ma ọ bụ tinye ma ọ bụ wepu ọdịnaya, mana ka kwado okike dika o kwere mee maka onye ọrụ, nke mere na ị ga-elekwasị anya naanị n'ihe dị mkpa na ihe na-erughị nkeji 5 ị nwere ike ịnwe ihe ngosi ahụ. N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, Slidebean anaghị enye anyị atụmatụ n'efu iji nwalee etu ngwa ahụ si arụ ọrụ, mana n'agbanyeghị atụmatụ anyị họọrọ, anyị nwere oge nnwale iji hụ ma ọ dabara mkpa anyị.
Zoho, nke sitere na PowerPoint
Ọ bụrụ na ị nwere eji PowerPoint na ị chọghị ịmalite ịmalite ịmụ maka ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị ma ọ bụ ngwa iji mepụta ihe ngosi, Zoho Gosi Ọ bụ ihe kacha nso na PowerPoint anyị ga-ahụ, ebe ọ bụ na interface ya yana ọnụọgụ nhọrọ, opekata mpe nke kachasị, dị ka ndị anyị nwere ike ịchọta na ngwa Microsoft. Gbakwunye onyonyo, igbe ederede, akụ, ahịrị… ihe niile dị mfe iji mepụta Zoho Show.
Banyere ọnụ ọgụgụ nke ndebiri anyị nwere n'aka anyị, ọ dị oke njedebe, ọ bụghị ikwu ihe na-adịghị adị, ma ọ bụrụ na echiche gị bụ nke gị na ọ nweghị nsogbu ị na-enwe banyere ihe ngosi slide, ị nwere ike ịchọtala ngwa ịchọrọ iji mepụta ihe ngosi gị.
Nhọrọ kacha mma na PowerPoint?
Kedu ka anyị ga-esi hụ ọrụ / ngwa weebụ ọ bụla anyị gosipụtara gị n'isiokwu a ha na-adabere na nsọtụ dị iche iche, yabụ ọ bụrụ na ihe anyị bụ imepụta ihe ngosi dị egwu, nhọrọ kachasị mma bụ Ludus, ebe ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ihe ndebiri mepụta ihe ngosi, Slidebean dị mma. Ihe niile dabere na mkpa anyị, yabụ ị ga-edo anya nke ọma tupu ị nweta ụgwọ ọrụ wee bido ịmara ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Uzo ndi ozo kacha mma na PowerPoint